Gudoomiye ku xigeenka gudigga doorashooyinka Qaranka oo ka jawaabay xil ka qaadis lagu sameeyay. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Gudoomiye ku xigeenka gudigga doorashooyinka Qaranka oo ka jawaabay xil ka qaadis lagu sameeyay.
Gudoomiye ku xigeenka gudigga doorashooyinka Qaranka oo ka jawaabay xil ka qaadis lagu sameeyay.
January 12, 2019 - By: Mohamud Nadif
Sayid Cali Sheekh gudoomiye ku xigeenka gudigga doorashooyinka Qaranka soomaaliyeed oo habeenimadii xalaysto ay xilka ka qaadeen xubno ka tirsan gudiga ayaa shir jaraaid oo uu ku qabtay Magaalada Muqdisho waxa uu iska difaacay eedaymo loosoo jeediyay iyo sharci ahaanshaha xilka qaadista lagu sameeyay.
Gudoomiye ku xigeenka gudiga doorashooyinka Qaranka Sayid Cali Sheekh